Maitiro ekuvhura CBR mafaera - VidaBytes | LifeBytes
Nzira yekuvhura mafaira eCBR
Iwo mafaera edhijitari atinogona kuwana pamapuratifomu akasiyana epamhepo anogona kunakidzwa kuburikidza nemidziyo yakasiyana muPDF, Shoko, JPG kana mamwe mawedzero angave ekutanga kuaona uye anogona kungovhurwa nemamwe maapplication. Nhasi tichataura nezvekuvhura mafaira eCBRSezvo vazhinji venyu vangangove munoziva, iwo mafaira ane mifananidzo yakasiyana inogona kutariswa uchishandisa chaiwo maapplication.
Iri rudzi rwefaira fomati inonyanya kuenderana nenyika yemakomiki., kunyange zvazvo inogona kuwanikwa mune mamwe marudzi emafaira. Kana iwe uchida makomiki, zvirokwazvo wanga uchida kunakidzwa nawo kanopfuura kamwe, asi hausati waziva nzira yekuvhura iyo CBR faira, izvi zvichapera nekuda kwematipi atichakupa mune ino chinyorwa.
1 Chii chinonzi CBR mafaira?
2 Zvirongwa zvekuvhura CBR mafaera muWindows
3 Zvirongwa zvekuvhura CBR mafaera paMac
3.1 Comic Bhuku Rekutarisa
4 Mapurogiramu ekuvhura mafaira eCBR pa Android kana IOS
Chii chinonzi CBR mafaira?
Aya mafaera eCBR akafanana nemamwe akawanda atichange tasangana nawo kanopfuura kamwe, ZIP kana RAR, nhevedzano yemagwaro akatsikirirwa. Imwe yemisiyano mikuru yemafaira eCBR ndeyekuti aya ine nyaya dzizere nemitsara yemifananidzo. Iyi mifananidzo yakaiswa muhurongwa chaihwo, kuitira kuti kana uchinakidzwa nazvo zviitwe zvakarongeka.
Mafaira eCBR, kazhinji sezvatakaratidza pakutanga kwebhuku, anoshandiswa kuchengetedza makomiki nedhijitari. Iyo fomati, iyo isingaratidze chero kukundikana kana decompressing ine chaiwo maapplication ayo akadai seWinZip.
Mugadziri weiyi faira fomati ndiDavid Ayton, uyo mumakore ekuma90 akagadzira software yekuona makomiki pasina matambudziko, software iyi yaive CDisplay.. Kuvhurwa kwechirongwa chitsva ichi chaive shanduko huru kune nyika yekuona mifananidzo iripo kusvika nhasi.
Kutenda kuCDisplay, kutevedzana kwemifananidzo kwakaonekwa pahwindo nekupinza kukuru.z, mhando uye ruzivo, nguva dzose vachiremekedza kurongeka kwamaka kana uchiverenga zviitiko zvakarondedzerwa pakati pemapeji.
Mavambo ekutanga "CB", akajairika emhando iyi yefaira, anobva kuComic Book, chimiro chakagadzirwa kuti chikwanise kuvhura uchishandisa CDisplay software. Kana panguva ye uchidhawunirodha mafaera aya unotarisa tsamba yekupedzisira, izvi zvinoreva rudzi rwekudzvanya kwave kushandiswa, kureva, kana iri kuburikidza neRAR faira, ichaonekwa .cbr, kune rumwe rutivi kana iri ZIP, iyo faira ichaonekwa ine zita .cbz.
Kana iwe wakagadzirira kuenderera mberi kana kutanga kunakidzwa nenyaya dzemakomiki aunofarira, Isu tinokuunzira sarudzo yemamwe eakanakisa mapurogiramu ekurodha uye kuvhura iyi mhando yefaira nenzira iri nyore uye isina kukanganisa, muchikamu chinotevera. Isu tichaona kwete chete zvirongwa zvakaratidzwa kune avo vashandisi veWindows, asiwo kune avo vanoshandisa Mac.Kuwedzera kune nharembozha yezvose zviri zviviri Android neIOS.
Zvirongwa zvekuvhura CBR mafaera muWindows
Kana iwe uri mushandisi weWindows uye iwe uchida kuziva uye kudzidza kuti ungavhura sei CBR mafaera, unogona kuwana imwe yeanotevera zvirongwa zvatiri kuzotaura.
Hatina kukwanisa kutaura chirongwa ichi mune yedu runyorwa uye tinotenda musiki wayo nepfungwa yekuita iyi mhando yefomati nezvose zviri pedyo nayo. CDplay, Icho chirongwa chakareruka kwazvo chemakomputa, asi panguva imwechete inoshanda zvakanyanya Uye pasina kukanganwa kuti yakasununguka zvachose.
Icho chirongwa chakanyatso shandirwa pachiri uye chimwe chezvinofarirwa nevadikani vemakomiki. Inopa chiitiko chinoshamisa chekuverenga, kukwanisa kuverenga mafomati akasiyana sePDF, CBR, CBZ, pakati pemamwe. Makomiki anotakurwa mune imwe nyaya yemasekonzi pasina kurasikirwa nemhando uye nekuremekedza marudzi ese ezvinyorwa.
Chimwe chezvirongwa zvikuru, maererano nekuverenga mafaira eCBR inoratidzirwa kuverenga makomiki pakombiyuta. Nesoftware iyi, haugone kungonakidzwa nenyaya dzinotaurwa pakati pemapeji ekomiki, asi iwe unogona zvakare kugadzirisa zvedhijitari.
Chinhu chakanaka kune avo vanhu vane godo rekugovana mafaira avo, ndizvo Gonvisor inokupa iwe mukana wekuchengetedza magwaro ako ekuverenga uchishandisa password. Sarudzo inopa kukosha kuchirongwa ichi.
Zvirongwa zvekuvhura CBR mafaera paMac
Panguva ino yauri, tichaona zvirongwa zvakasiyana izvo vashandisi veMac vachakwanisa kuvhura mafaira eCBR pasina matambudziko.
Comic Bhuku Rekutarisa
Nechirongwa ichi chekutanga chatinounza kune iyi runyorwa, haugone chete kuvhura mafaira eCBR, asiwo CBZ uye mafaera ePDF. Nekushandisa iri nyore interface, iwe unozogona kufamba nekukurumidza mukati mezvese zvirimo izvo zvinokupa iwe. Izvi zvinoitwa nyore kutenda kune zvigunwe zvinounzwa kwauri.
Chimwe chezvinonyanya kukwezva ndechekuti inotsigira kuverenga nekuona mapeji maviri. Neiyi sarudzo yekuratidzira, chinangwa ndechekutevedzera kuverenga kwenyambo, sekunge uri kutenderedza mapeji kubva kurudyi kuenda kuruboshwe neminwe yako. Unogona kuva nechirongwa ichi pamudziyo wako kuburikidza neApp Store ye5.49 euros.
Sezvizhinji zvezvirongwa zvatave kutaura, DrawnStrip Reader inopindiranawo nemamwe marudzi emafomati mukuwedzera kuCBR, senge; CBZ, CB7. CBT, ZIP, RAR, pakati pevamwe. Iyi software yatiri kutaura nezvayo yakagadziridzwa retina skrini, zvakare inokupa iwe mukana wekushandura mafaera aya kune mamwe mafomati.
Iyo zvakare inobvumidza iwe kuti utore mifananidzo kubva kune ako aunofarira mafaera, uye ugone kugovera iwo. Chinhu chakanyanya kunaka ndechekuti inokupa kupenya uye misiyano yekugadzirisa kuti ienderane nezvaunoda. Unogona kuwana DrawnStrip Reader nekuitenga kuApple Store nemutengo we4.49 euros.
Mapurogiramu ekuvhura mafaira eCBR pa Android kana IOS
Muchikamu chino chekupedzisira, tichaona akatevedzana maapplication anoratidzwa kunakidzwa nemhando iyi yemafaira panharembozha yedu pasina chero mhando yekudhawunirodha kana kuratidza kukanganisa.
Imwe yeakanakisa application yaunokwanisa kuwana pamusika weAroid zvishandiso, iyo yaunogona kunakidzwa nayo ese CBR uye CBZ mafaera. Haisi kungogara ipapo, asi zvakare inopindirana nemamwe marudzi emafomati akadai seJPG, GIF, PNG kana BMP.
Iyo ndeye yemahara application, asi ine advertising content, iyo yaunogona kubvisa kana iwe ukatenga bundled app. Ziva kuti kwete chete zvinokutendera kuti udzikise mafaira eCBR neCBZ zvakananga, asi iwe unogona zvakare kuwana mifananidzo wakazvimirira.
Kune vashandisi veIOS, tinokuunzira izvi yakapusa application ine chinangwa chikuru kukubvumidza kuti uverenge CBR neCBZ mafaera. Nayo, unogona kuwana mafaera akachengetwa munzvimbo dzakasiyana dzedhijitari seDropbox, Dhiraivha, OneDrive, nezvimwe.
Kurodha mafaera akasarudzwa kubva kune chero webhusaiti kunoitwa zvakananga pafoni yako. Sezvakaitika muchiitiko chakapfuura, ndeye yemahara application inowanikwa muApple chitoro.
Parizvino, runyorwa rwedu rune zvikumbiro zvakasiyana zvezvirongwa uye maapplication aripo kuti iwe ugone kunyura pachako munyaya dzinonakidza dzenyika dzemakomiki. Iwe unongo ziva, ndeipi chirongwa kana application inoratidzwa zvinoenderana nemudziyo waunoda kutanga kuverenga, kurodha, kuisa uye kutanga kunakidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: HupenyuBytes » Applications » Nzira yekuvhura mafaira eCBR
Maitiro ekuona Instagram nyaya pasina kucherechedzwa
Zvirongwa zvekushandura mafoto kuita mavhidhiyo